China ZBR1001J Optical Mugamuchiri Chinyorwa Kugadzira uye Fekitori | Zongju
ZBR1001J Optical Mugamuchiri Chinyorwa
1. Chigadzirwa Pfupiso
ZBR1001JL optical receiver ndiyo ichangoburwa 1GHz FTTB optical receiver. Iine huwandu hwakawanda hwekugamuchira simba remaziso, yakakwira kuburitsa nhanho uye yakaderera simba rekushandisa. Iyo ndiyo yakanaka michina yekuvaka yepamusoro-performance NGB network.
2. Maitiro Ekuita
■ Yakanaka Optical Optical AGC yekudzora matekiniki, kana iyo yekuisa magetsi emagetsi renji iri -9～ ＋2dBm, chikamu chekuburitsa, CTB uye CSO hazvina kuchinja;
■ Downlink inoshanda frequency inowedzerwa ku1GHz, RF gudzazwi chikamu chinotora yakakwira mashandiro epasi simba rekushandisa GaAs chip, iyo yepamusoro yekubuditsa nhanho inosvika ku112dBuv;
■ EQ uye ATT zvese zvinoshandisa hunyanzvi magetsi ekudzora wedunhu, zvinoita kuti kutonga kuve kwakaringana, kushanda kuve nyore;
■ Yakavakirwa-mukati memunyika standard II kirasi network manejimendi anopindura, tsigira kure network manejimendi (sarudzo);
■ Compact mamiriro, kumisikidzwa kuisirwa, ndiyo yekutanga sarudzo michina yeFTTB CATV network;
■ Yakavakirwa-mukati yakasimba kuvimbika pasi simba rekushandisa magetsi, uye inosarudzika yekunze magetsi magetsi.
3. Technique Paramende
Kugamuchira Optical Power
Optical Return Kurasikirwa
Optical Kugamuchira Wavelength
Optical Connector Rudzi
SC / APC kana yakatsanangurwa nemushandisi
ZBR1001J (FZ110 kuburitsa)
ZBR1001J (FP204 kuburitsa)
≥ 108 (-9 ~ + 2dBm Simba rekugamuchira simba)
≥ 104 (-9 ~ + 2dBm Simba rekugamuchira simba rinogashira)
≥ 112 (-7 ~ + 2dBm Simba rekugamuchira simba rinogashira)
≥ 108 (-7 ~ + 2dBm Simba rekugamuchira simba)
Kubuditsa Kudzosera Kurasikirwa
(-9dBm / -8dBm / -7dBm / -6dBm / -5dBm / -4dBm) - (+ 2dBm) inogadziriswa
Magetsi kudzora EQ renji
Magetsi kudzora ATT renji
D: DC 12V / 1A Magetsi ekunze magetsi
Cherekedza 1: Gadzira 59 PAL-D analog chiteshi zviratidzo pa 550MHz frequency renji. Tumira dhijitari chiratidzo pane iyo frequency renji ye 550MHz～862MHz. Dhijitari chiratidzo chiratidzo (mu 8 MHz bandwidth) iri10dB yakaderera pane analogini chiratidzo yekutakura nhanho. Kana iyo yekuisa Optical simba yeiyo Optical inogamuchira iri-1dBmpadanho rekuburitsa: 108dBμV, EQ: 8dB.
4. Bhuroka Diagram
ZBR1001J ine II kirasi network manejimendi anopindura, FZ110 (pombi) inoburitsa block dhayagiramu
ZBR1001J ine II kirasi network manejimendi anopindura, FP204 (mbiri-nzira mahwanda) inoburitsa block dhayagiramu
ZBR1001J FZ110 (pombi) inoburitsa block dhayagiramu
ZBR1001J FP204 (mbiri-nzira mahwanda) inoburitsa block dhayagiramu
5. Relation Tafura yeInput Optical Power uye CNR
6. Yakachena uye yekugadzirisa nzira yeiyo Optical fiber inoshanda yekubatanidza
Munguva zhinji, isu tinofungidzira kuderera kwesimba rekuona kana iko kuderedzwa kweiyo optical receiver kuburitsa nhanho semidziyo yezvikanganiso, asi chaizvo zvinogona kukonzerwa nekukanganisa kwakabatana kweiyo Optical fiber connector kana iyo Optical fiber connector yakasvibiswa ne guruva kana tsvina.
Zvino zivisa dzimwe dzakajairika nzira dzakachena uye dzekuchengetedza yeiyo optical fiber inoshanda chinobatanidza.
1.Carefully bvisa iyo optical fiber inoshanda chinongedzo kubva kuAdapter. Iyo yemagetsi fiber inoshanda chinongedzo haifanire kutarisa kumuviri wemunhu kana maziso akashama kuti arege kukuvara netsaona.
2.Wash nokungwarira neakanaka mhando lens yekupukuta bepa kana yekurapa degrease doro donje. Kana ukashandisa iyo yekurapa degrease doro donje, uchiri kuda kumirira 1 ~ 2 maminetsi mushure mekugeza, rega iyo yekubatanidza pamusoro iome mumhepo.
3.Iyo yakachenesa Optical fiber inoshanda chinongedzo chinofanirwa kuve chakabatana neanowoneka magetsi mita kuyera kuburitsa Optical simba kusimbisa kana yacheneswa.
4.When painomesa iyo yakacheneswa Optical fiber inoshanda chinongedzo kudzokera ku adapta, inofanirwa kucherechedza kuti iro simba rakakodzera kudzivirira ceramic chubhu mune iyo adapta kutsemuka.
5.Kana iro rinobuda simba remagetsi harina kujairika mushure mekuchenesa, rinofanira kumisikidza adapta uye kuchenesa imwe yekubatanidza. Kana iwo magetsi emagetsi achiri pasi mushure mekuchenesa, iyo adapta inogona kunge yakasvibiswa, ichenese. (Cherekedza: Chenjerera paunobvisa adapta kuti usakuvara mukati mefibre.
6.Shandisa yakatsaurwa yakamanikidzwa mweya kana kudzikisira doro donje bar kuchenesa adapta. Paunenge uchishandisa mweya wakamanikidzwa, iyo tomu yeakadzvanywa mweya tangi inofanirwa kunangidzira pane zvedongo chubhu yeadapter, chenesa ceramic chubhu nemhepo yakamanikidzwa. Kana uchishandisa degrease doro donje bhawa, nyatso isa iyo doro donje bhaa mune zvedongo chubhu kuchenesa. Iyo yekuisa nzira inofanirwa kuenderana, zvikasadaro haigone kusvika pakanaka yekuchenesa maturo.
7. Mushure mekutengesa-tsananguro yebasa
1.We chivimbiso: Mahara garandi yemwedzi gumi nematatu (Siya fekitori nguva pane chigadzirwa giredhi chitupa sezuva rekutanga). Yakawedzerwa garandi izwi zvichienderana nechibvumirano chekugovera. Isu tine basa rekuchengetedza kwehupenyu hwese. Kana iyo mhosho yekukonzeresa ikakonzerwa nevashandisi 'kushanda zvisirizvo kana zvikonzero zvisingadzivisike zvezvakatipoteredza, isu tichava nemutoro wekugadzirisa asi tinobvunza yakakodzera mutengo wezvinhu.
2.Kana iyo michina ichiputsa, pakarepo dana runhare rwedu rutsigiro hotline 8613675891280
3.Iyo saiti yekugadzirisa iyo yekukanganisa michina inofanirwa kushanda nehunyanzvi hwehunyanzvi kudzivirira yakanyanya kukuvara
Special ziviso: Kana iyo michina ichichengetedzwa nevashandisi, isu hatizoitisa mutoro kugadziridza kwemahara. Tichakumbira yakakodzera yekugadzirisa mutengo uye zvemari mutengo.
Pashure: LC kuLC OM1 Duplex Patch Cord
Zvadaro: LC KuLC OM2 Duplex Patch Cord
Nzira mbiri FTTB Optical Mugamuchiri ZBR1002D
ZHR1000P FTTH Optical Mugamuchiri
ZBR200 Mbiri Yakabuda FTTB AGC Optical Inogamuchira
ZHR1000MF FTTH Fiber Optical Mugamuchiri
FTTH WDM Fiber Optical Mugamuchiri
ZHR1000M FTTH Fiber Optical Mugamuchiri